क्यान्सरबाट बचाउने प्रमुख १० खानेकुरा | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
क्यान्सरबाट बचाउने प्रमुख १० खानेकुरा
access_time२०७६ साल श्रावण २५ गते, शनिबार ०२:१४ PM chat_bubble_outline Comments folder_open स्वास्थ्य​
काठमाडौं । क्यान्सर अहिलेको उपचार पद्दतीमा सबैभन्दा जटिल रोग हो । नसर्ने रोगमा यो पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा देखिन थालेको छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै क्यान्सरलाई जटिल रोगको रुपमा हेरिन्छ ।
क्यान्सरको उपचार कठिन मात्र छैन, कतिपय अवस्थामा उपचार सम्भवसमेत छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार २०१८ मा मात्र ९ दशमलब ६ मिलियन मान्छे अर्थात झण्डै १ करोड क्यान्सरका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । ७० प्रतिशत कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकका नागरिक छन् ।
क्यान्सरको धेरै असर ५० वर्ष वा सो भन्दा धेरै उमेरका व्यक्तिमा बढी छ । ५० देखि ६९ वर्षसम्मको उमेर समुहका ४३ प्रतिशत मानिसमा र २७ प्रतिशत ७० वर्ष भन्दा माथि उमेर समूहका मानिसहरु प्रभावित भएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार २०१८ मा मात्र ९ दशमलब ६ मिलियन मान्छे अर्थात झण्डै १ करोड क्यान्सरका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । ७० प्रतिशत कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकका नागरिक छन् । क्यान्सरको धेरै असर ५० वर्ष वा सो भन्दा धेरै उमेरका व्यक्तिमा बढी छ । ५० देखि ६९ वर्षसम्मको उमेर समुहका ४३ प्रतिशत मानिसमा र २७ प्रतिशत ७० वर्ष भन्दा माथि उमेर समूहका मानिसहरु प्रभावित भएका छन् ।
क्यान्सरबाट मृत्यु हुने एक तिहाई मध्यपान तथा धुम्रपान, शारिरीक कसरतको कमी, फलफूल तथा सागपातकोे कम प्रयोग र तौल धेरै हुने लगायतका मानिस रहेका छन् ।
ल्यूकेमियाका कारण झण्डै पाँच प्रतिशत बालबालिका र १४ वर्ष मुनिका किशोर किशोरीमा क्यान्सर देखिने गरेको छ ।
क्यान्सर होस् वा जुनसुकै अन्य रोग लाग्नुमा हाम्रो दैनिकी र हामीले उपभोग गर्ने आहारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । केही खानेकुराल जसले क्यान्सरबाट बचाउन सक्छ वा क्यान्सर प्रतिरोधात्मक समेत रहेका छन् ।
दैनिक भान्छामा प्रयोग गर्ने लसुन क्यान्सर विरामी र क्यान्सर हुन बाट बच्न दुवैका लागि लसुन बहु उपयोगी रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ ।
विशेषगरी पेट र अण्डकोषमा क्यान्सर हुनबाट बचाउछ । लसुनको प्रयोगले कुनै पनि अंगमा पलाएको मासुलाई बढ्न दिँदैन ।
लसुनमा पाइने एलाईल सल्फरले क्यान्सर कोषलाई क्षति गर्ने गर्दछ । क्यान्सरका रोगीहरुलाई यदि लसुन पिसेर पानीमा घोलेर खुवाइयो भने यसबाट क्यान्सर भएकाहरुलाई विशेष फाइदा पुग्ने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
क्यान्सरबाट बच्नका लागि लसुनको पानीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । लसुनको दैनिक प्रयोगले पाचन प्रणालीमा मद्धत पु¥याई इसोफोगस र पेटको क्यान्सर समेत हुँदैन ।
गोलभेडाको प्रयोगले पुरुषहरुको प्रोस्टेट ग्रन्थीको क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ । गोलभेडामा पाउने एन्टीअक्सिडेन्ट र लाइकोपिन पदार्थले प्रोस्टेट कोषको डीएनएलाई असर गर्न बाट जोगउँछ ।
यसरी टमाटरले क्यान्सरबाट जोगाउन सहयोग गर्छ ।
कुर्कुमिन बेसारमा पाइने चम्किलो र पहेंलो रसायन हो । बेसारमा पाइने कुर्कुमिनले क्यान्सरको जोखिमबाट बचाउँछ ।
अमेरिकी क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार कुर्कुमिनले क्यान्सरलाई फैलिनबाट जोगाउने गरेको छ । बेसार एउटा राम्रो एन्टिसेप्टिक पनि हो । त्यसैले यसको नियमित सेवन गर्न चिकित्सकले सल्लाह दिन्छन् ।
दैनिक भान्छामा सलादको रुपमा प्रयोग गर्ने गाजरमा पनि क्यान्सर रोगका लागि बहु उपयोगी मानिन्छ । गाजरमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टका कारण हृदय रोग र क्यान्सरको जोखिम कम हुन्छ ।
गाजरको जुसले फोक्सो, कोलोन, प्रोटेष्ट, ल्यूकेमिय आदिकोे क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ । गाजरमा पाइने बिटा क्यारोटीन र एन्टिअक्सिडेन्ट भिटामिन ए को संश्लेषण साथै क्यारोटीनोइड्सका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
अदुवाको सेवनले क्यान्सर रोगको जोखिम कम मात्र होइन, क्यान्सर रोगको रोकथाम समेत गर्दछ ।
नर्थअमेरिकन केमिकल सोसाइटीका अनुसन्धानकर्ताहरुले मुसामा गरेको अनुसन्धानबाट अदुवा र खुर्सानीको सेवनले क्यान्सर रोगको जोखिम कम गर्ने पत्ता लागेको थियो ।
अदुवामा ‘जिन्जोरेल’ नामक बासनादार तत्व समावेश हुन्छ, जसको संयोजनमा ६ जिन्जेरेलले क्यान्सरको जोखिम कम गर्ने अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो ।
क्यापसाइकइन र ६ जिन्जोरलले ट्युमर वृद्धि हुनबाट बचाउँछ भने दुवै कोषिकामा बाँधको रुपमा काम गर्छ ।
६. ग्रिन टी
‘ग्रिन टी’ को नियमित सेवनले पुरुषमा प्रोटेस्ट क्यान्सरको खतरा कम हुने अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकाकामा भएको एक अध्ययनमा ‘ग्रिन टी’ ले क्यान्सरका जीवाणुको विकासमा रोक लगाउने र यस्तो समस्या भएकाहरुमा समेत थप विकास हुनबाट जोगाउने देखिएको हो ।
एन्टिअक्सिडेन्ट गुणबाट भरिपूर्ण ग्रीन टीले शरीरलाई रोग प्रतिरोधी बनाउन सहयोग गर्छ । यसमा एक किसिमको पोषण तत्व हुन्छ, जसले क्यान्सरको कोशिकालाई बढ्न दिदैन । त्यसैले क्यान्सर प्रतिरोधी खानेकुरामा ग्रीन टी पनि मुख्य मानिन्छ ।
७. ब्रो काउली
ब्रो काउलीले क्यान्सरको जोखिमबाट जोगाउने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । ब्रो काउली खानाले क्यान्सरका कोषहरु बनेका छन् भने पनि त्यसलाई वृद्धि हुन नदिई त्यहीँ निष्कृय पार्ने काम गर्छ ।
ब्रो काउलीमा पाइने ग्लुकोसिनोटेल र सल्फोराफेन नामक रसायनले क्यान्सर लाग्न सक्कने तन्तुहरु हटाउनछन भने इन्डोल वार्विनोल र डाइ–इन्डोमिथेन रसायनले डीएनएको मर्मत गरी क्यान्सर रोग लगाउने कोषहरु समेत बढ्न दिँदैन ।
काउलीको प्रयोगले फोक्सो, स्तन, आन्द्रा, डिम्वाशय र मुत्रथैलीको क्यान्सरबाट बचाउन मद्दत गर्दछ ।
अंगुर मानव स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण फल हो । अंगुरले क्यान्सर रोगको रोकथामका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
विशेषगरी अंगुरमा पाइने पोलीफेनोलिक फाइटोकेमिकलले क्यान्सरबाट बचाउँछ । कोरोनरी मुटुरोग, नसारोग, बिर्सने रोग र फंगल संक्रमणबाट लड्ने क्षमता समेत प्रदान गर्छ ।
जमरामा क्लोरोफिल, अमिनो एसिड, मिनेरल्स, भिटामिन ए, भिटामिन बी कम्प्लेक्स, भिटामिन डी र इ को ठूलो स्रोत रहेको हुन्छ ।
गहुँको जुसमा म्याग्नेसियम, पोटासियम, आइरन, जिन्क, कपर, सेलेनियम र थाएमिन पाइन्छ ।
एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टी ब्याक्टेरियल, एन्टीक्यान्सर तथा एन्टी इन्फ्लामेटरी गुण रहेको हुन्छ ।
जमराको रसको सेवनले क्यान्सर निको पार्छ भने पुराना घाउ, मधुमेह रोगको उपचारमा समेत सहयोग पु¥याउँछ ।
च्याउले सरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ । यसमा एगोथियोनाइन नामक एन्टी अक्सिडेन्ट पाइन्छ । यसले छालालाई फ्री रेडिकल्सबाट बचाउनुका साथै इम्युनिटी पावर पनि बढाउँछ ।
च्याउको सेवनले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई सन्तुलित गर्नेदेखि स्तन क्यान्सर तथा प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम समेत कम गर्दछ । साथै मधुमेहको खतरालाई पनि घटाउने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
प्रधामन्त्री भेट्न राष्ट्रपति अस्पतालमा: प्रधानमन्त्री ओली आजै डिस्चार्ज हुने
स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिको अन्त्य गरिन्छः मन्त्री ढकाल